सशस्त्रमा बाह्य हस्तक्षेप, तोकिएको गणमा किन जान पाएनन् खनाल ? | RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रमुख सशस्त्रमा बाह्य हस्तक्षेप, तोकिएको गणमा किन जान पाएनन् खनाल ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा सोमबार विहान सि.सं. ४ व्यवस्थापन तथा योजना तालिमको समापन कार्यक्रम थियो । ३२ जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहभागी सो तालिम समापनपछि ८६२ आईडी नम्बरका शंकर खनाल करिब तीन साताअघि निकालिएको काज सरुवाअनुसार नम्बर २७ गण रुपन्देही जाने तयारीमा थिए । यसका लागि उनले दिउँसो २ बजेको हवाइ टिकटसमेत लिइसकेका थिए । तर, मध्यान्ह १२ बजे उनलाई तत्काल सो गणमा नजान भनियो ।
एसपी खनाललाई ५ पुसमै नम्बर २७ गणमा काज सरुवा गरिएको थियो । काज सरुवापछि व्यवस्थापन तथा योजना तालिममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनी तत्कालै त्यहाँ जान पाएका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एक वर्ष बिताइसकेका ८५२ आईडी नम्बरका तेजप्रसाद पोखरेलको ठाउँमा नेपाल खेलकुद तथा शारीरिक सुगठन शिक्षालयमा कार्यरत शंकर खनाललाई काजमा रुपन्देहीमा पठाउन खोजेको भएपनि ‘शक्तिकेन्द्र’ को चलखेलपछि उनी त्यहाँ जान नपाएका हुन् । सो गणमा सिसं २ कै एसपी हाल नम्बर ३६ गण डोटीमा कार्यरत भरत खनियाँले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेपछि एसपी खनाल नम्बर २७ गण रुपन्देही जान नपाएका हुन् ।
सीस्थित गणबाट नम्बर ३६ गणमा सरुवा भएर गएका थिए । यो उनको दोस्रो गण थियो । तर गणपति हुँदाहुँदै पुनः अर्काे गणमा जान खोज्नुमा उनको निहित स्वार्थ रहेको स्रोतको दाबी छ । सशस्त्रकै कतिपय अधिकारीहरु संगठनको ‘चेनअफ कमान्ड’ लाई अस्वीकार गरेकाले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने तर्कसमेत राख्छन् । उनको यस्तो कार्यले संगठनको चेन अफ कमान्ड बिग्रन, संगठन प्रमुखले आफूअनुसार काम गर्न नपाउने र कालान्तरमा यसको गम्भीर प्रभाव पर्नेसमेत सशस्त्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यद्यपि एसपी खनाललाई भने सशस्त्र प्रहरी बलले ९ गते मनाउन लागेको आफ्नो २० औं वार्षिकोत्सवका कारण पठाउन ढिलाइ हुने जनाउ दिइएको छ ।
(डोटी गणका गणपति एसपी खनियाँलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक । फाइल तस्बिर)